Tao anatin’ny tapa-bolana indray dia tapatapaka ny rano, ka sahirana nitady rano ny mponina teny Ankatso. Ny zoma teo no nanao hetsika ny mponina ka nilanja sorabaventy. Manomboka amin’ny 11 ora alina, hoy ny fanazavan’ny mponina no mivoaka milahatra rano eny amin’ny paompin-drano izy ireo ary bidao maro no efa eo. Tsy mionona amin’izay anefa ireo mponina, fa mitady rano ivelan’ny fokontany ka tonga hatreny Mandroseza izy ireo no maka rano ampiasaina na maka eny amin’ny dobo. Ho an’ireo mpanao hotely kosa izay mampiasa rano be indrindra dia tsy maintsy mividy rano izy ireo, ka arivo ka hatramin’ny 3.000 ariary izany, hoy ny fanazavana. Miezaka ny mitady vahaolana hatrany ny eo anivon’ny jirama, mba hisorohana ny tranga hafa mety hiseho, hoy ny fanazavana.